Gochi hiriira naannoo Amaaraatti raawwatame tokkummaa fi waliin jireenya ummataarratti dhiibbaa waan qabuuf ariitiin tarkaanfiin fudhatamuu akka qabu jiraattonni godina Gujii Lixaa gaafatan - ETHIOPIANS TODAY
Gochi hiriira naannoo Amaaraatti raawwatame tokkummaa fi waliin jireenya ummataarratti dhiibbaa waan qabuuf ariitiin tarkaanfiin fudhatamuu akka qabu jiraattonni godina Gujii Lixaa gaafatan.
Dhaadannoowwan, arrabsoo fi tuffiin guyyaa kaleessaa hiriira naannoo Amaaraatti gaggeeffame waliin jireenya ummattoota Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa waan qabaatuuf luugami itti godhamuu akka qabu jiraattoti godina Gujii Lixaa tokko tokko gaafatan.
Akka yaada jiraattota kanaatti, Oromummaan bu’uura hin buqqaane, dhiigaa fi lafee Oromoota qaqqaalii fi goototaan waan ijaarameef wacni kamiyyuu hin laaffisu jedhan.
Oromoon akkuma aadaa isaa dubbii itti galte tana ilaa fi ilaameen hubachuun falachuu akka qabus dhaaman.
Ilaalchi dharraatota nafxanyaa garee paartii siyaasaa muraasan ijaaramaa jiru Itiyoophiyaa dullattii ijaaruuf adeemamu waan taheef, Itiyoophiyaa Oromoo fi sablammoota hundaaf mijattuu taate uumuuf Oromoon tumsa gochaa ture itti fufsiisuurraa duubatti hin deebi’u jedhan.
Ethiopia: South Sudanese Decision to Ratify CFA Major Breakthrough – Experts Observe